ပြင်သစ်နှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားပြင်သစ်စကားပြောဒေသများသို့ခရီးသွားများအတွက်ကားတစ်စီးနှင့် drive ကို၏ဘီးနောက်ကွယ်မှရလိုပေမည်။ သင်သည်ထိုအုပ်စုတွင်မှန်လျှင်, သင်မောင်းနှင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအနည်းငယ်ပြင်သစ်စကားများသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒီပြင်သစ်ဝေါဟာရသင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးအားဖြင့်, သင်သည်တစ်ခုကားတစ်စီး၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်အညွှန်းတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နှင့်ပြင်သစ်လူမျိုးနှင့်လမ်းများအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်ပုံကိုသိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်သွားလာနေစဉ်အတွင်းသငျသညျအသုံးဝင်သောကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်လွယ်ကူသောသင်ခန်းစာနှင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစကားလုံးများအများစုကဖိုင်တွေ .wav ဆက်စပ်နေကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသံထွက်ကိုနားထောင်ဖို့ link ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါလမ်းမကြီးပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်များ (Véhicules sur la လမ်းကြောင်း)
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သင်လမ်းမပေါ်တွင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုမော်တော်ယာဉ်၏အခြေခံအမျိုးအစားများများအတွက်ပြင်သစ်စကားများ (းéhicules) သင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (le သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကား - Une အော်တို (မော်တော်ယာဉ်၏ apocope *) သို့မဟုတ် Une voiture
စက်ဘီး - Une bicyclette သို့မဟုတ် un vélo (vélocipède၏ apocope - ရှေးကသြော)
မော်တော်ဆိုင်ကယ် - Une moto (motocyclette ၏ apocope)
ဘတ်စ်ကား - ဌ '' autobus
Truck ကား - un camion
တက္ကစီ - un တက္ကစီ
* တစ် apocope ကဘာလဲ? ဒါဟာမူရင်းစကားလုံးတစ်ခုကိုတိုဗားရှင်းသောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်တွင်, စကားလုံးမော်တော်ယာဉ်မကြာခဏကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါတယ်လိုပဲ, အလိုအလျောက်ဖို့ကိုတိုစေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါလမ်းမကြီးပေါ်လူတွေ (က Les gens sur la လမ်းကြောင်း)
သင်တန်း၏, သည်အခြားယာဉ်မောင်း (conducteurs) သူတို့အကြားရှိပါတယ်။
ကားမောင်းသူ - un conducteur ( မှားယွင်းသော cognate စပယ်ယာ၏)
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် - un permis က de conduire
ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ - un မူဝါဒအ
Hitchhiking - ဌ '' Auto-မှတ်တိုင် (ဍ)
hitchhike မှ - Fair de l'Auto-မှတ်တိုင်
Hitchhiker - un အော်တို stoppeur
လမ်းများအမျိုးအစားများ (Types ဖယ်ရှားလမ်းကြောင်းများ)
လမ်း (la, rue) ကအများအပြားလမ်းများများ၏အမည်များများတွင်အသုံးပြုသည်အတိုင်းသင်တို့သည်အများဆုံးမကြာခဏကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပဲရစ်မှာကျော်ကြားလမ်းများ Rue က de Barre, Rue de l'Abreuvoir နှင့် Rue Montorgueil ပါဝင်သည်။
လမ်း - la, rue
အဝေးပြေး - Une autoroute
traffic စက်ဝိုင်း - rond-အမှတ် (ကတိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေကွဲပြားနိုင်သည်)
တရားရုံး - cour
သေဆုံးသူ - ကို un péage
သေဆုံးသူလမ်း - péageà Une autoroute
က de အခွန်ဆောင်သူ un péage - တစ်သေဆုံးသူဆပ်ဖို့
ယခုသင်သည်အဘယ်အရာကို, အဘယ်သူကို, အဘယ်မှာသင်ကားမောင်းပါလိမ့်မည်ကိုသိသောကြောင့်ပွငျသစျထဲတွင်မောင်းထုတ်ဖို့ဘယ်လိုများအတွက်စကားလုံးများကိုသင်ယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
မောင်းထုတ်ရန် - conduire သို့မဟုတ် rouler
လမျးခရီးတွင် - လမ်းကြောင်း en
ခရီးစဉ် - Une လေ့လာရေးခရီး
excursionner - လူတန်းစားပေါင်းစုံ / ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့
(ကားများနှင့်ယာဉ်အသွားအလာရည်ညွှန်းအတွက်) ကိုသွား / အပြောင်းအရွေ့ - စောင်ရေ
သငျသညျကားမောင်းနေစဉ်သင့်ရဲ့ရေကြောင်းပွငျသစျထဲတွင်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဤစကားများအားလုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့မရှိဘဲ, သင်ကမှားယွင်းတဲ့အလှည့် (mauvais tournant) ယူပါလိမ့်မယ်။
ဖြောင့်ရှေ့ - ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် droit
သွားလာလမ်းကြောင်း - ကူး
ဖွင့်ဖို့ - tourner
ညာဘက် - droite à
လက်ဝဲမှ - gauche à
signal ကို Turn - ဌအီး clignotant
ရပ်မှ - stationner
သွား - doubler
အလင်းအိမ်မလွှဲမရှောင်နှင့်ကံနှင့်အတူ, သင်ကအသွားအလာယိုမှာညပ်မိမည်မဟုတ်ပါများမှာရပ်တန့်။ သို့သျောလညျး, ကပွငျဆငျရနျနှငျ့သငျအသွားအလာ (စောင်ရေ) တွင်မှီဝဲရကြပါလျှင်သင်အမြဲသင့်ရဲ့ပြင်သစ်ကငျြ့သုံးနိုငျသညျအကောငျးဆုံးဖွစျသညျ။
အလင်းကိုရပ်တန့် - le feu Rouge
traffic ယို - un embouteillage
နှင့်အညီ, မျှော်လင့်, သင့်ကားအသွားအလာအတွက်ဖြိုဖျက်မထားဘူး။ ကမလျှင်, သင်တစ်စုံတစ်ဦးကရှင်းပြဖို့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကျိုး-Down - en ပန်း
ဖြိုဖျက်ရန် - ပန်း en être / tomber
သငျသညျကိုမောင်းဖို့ရွေးချယ်လျှင်, ဓာတ်ဆီဆိုင် (Une ဘူတာရုံ-ဝန်ဆောင်မှု) မှာရပ်တန့်မလွှဲမရှောင်သည်။ ဒါဟာသင့်ကားလိုအပ်ပါတယ်ဓာတ်ငွေ့ထားတဲ့အမျိုးအစားကိုသိရန်အရေးကြီးပေသည်။
ဓာတ်ငွေ့ / ဓာတ်ဆီ - က de l 'အနှစ်သာရ (စ)
ပုံမှန်ဓါတ်ငွေ့ - အနှစ်သာရ ordinaire
ပရီမီယံဓါတ်ငွေ့ - အနှစ်သာရ du စူပါ
ဒီဇယ် - le gasoil, gazole
ကတက်ဖြည့်ပါရန် - Fair le plein
ဓာတ်ငွေ့နင်း - un accélérateur
accelerator - un champignon (အလွတ်သဘော)
စတီယာရင်ဘီး - le volant
ပြောင်းကုန်ပြီကပ် - la boîte Manuel
ကားရှေ့မှနျ - un pare-brise
ကားရှေ့မှနျ Wiper - Les essuie-glaces
ရှေ့မီး - Les phares
အမြင့်ထုပ် - Les feux က de လမ်းကြောင်း
ဘရိတ် - Les freins
ဘရိတ်အလင်းအိမ် - le feux က de မှတ်တိုင်
ပြင်သစ်ဖော်ပြမှု Casser Les Pieds သည်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်နာမ်
"မွန်အမျိုးသား Avis" ပြင်သစ်တှငျအဘယျအဓိပ်ပာပါသလား?
( 'သိ') ပြင်သစ်ကြိယာ '' Savoir '' Conjugate လုပ်နည်း
နေ့စဉ်အဘိဓါန် Mandarin- သင်ခန်းစာ: "မင်္ဂလာ" တရုတ်မှာရှိတဲ့
ယင်းကြိယာစီးနင်၏ example sentences
အဆိုပါဗိုလ်မှူးပြင်သစ်ကြိယာ Vouloir အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ပြင်သစ် Irregular -RE ကြိယာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတဂျိမ်းစ် Buchanan နှင့် Secession အကျပ်အတည်း
ကို Creative သုတစာပေ
ထိပ်တန်း 20 ဂျပန်အမည်သစ်ကိုရသော
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: -osis, -otic
ဟောလိဝုဒ်မှာတော့ဖုတ်ကောင်: အ Edge တွင်
Virgo ထဲမှာအင်္ဂါဂြိုဟ် - သင်၏ Virgo အင်္ဂါဂြိုဟ်
ကျောင်းအုပ်ကြီး - မှာ Imperial ရောမမြို့ Timeline ကိုအပိုင်းငါ
ထိပ်တန်း5စတီဗင် Seagal, Movies
လူမှုဗေဒပညာရှင် Georg Simmel သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား
အဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်မှာကျွန်မရဲ့ကလေးဘဲလေး Classes ရဲ့ Begin သငျ့သလော
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းစင်ဒရဲလားသီချင်းများ
Tao က Te Ching - အခနျးငယျ 42 ဦး
ကျမ်းစာထဲမှာ Vampire ဖြစ်ပါသလား